မီးနီဖြတ်ရင် ကိုယ်ဝန်ရနိုင်လား? - For her Myanmar
ဒီခေါင်းစဉ်ကို ဖတ်ပြီး မီးပွိုင့်မီးနီကို သွားမမြင်မိပါနဲ့နော်။ မီးနီပြတယ်ဆိုတာ မိန်းကလေးတွေ ရာသီလာတဲ့အချိန်ကို ပြောချင်တာပါ။ ဟုတ်ကဲ့ …. ဒီလို ရာသီလာနေတဲ့အချိန် အတူနေမိ၊ လိင်ဆက်ဆံမိရင် ကိုယ်ဝန်မရနိုင်ဘူးလို့ ထင်နေခဲ့ရင်…..
ဒီအထင်ဟာ မှားပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ “မလိုချင်တဲ့အချိန်မှာ ကိုယ်ဝန်မရဖို့ ” ကံစမ်းတဲ့ နည်းလမ်းတွေကို မသုံးသင့်ပါဘူး။ ဘာလို့ ဒီလိုပြောလဲဆိုတော့ ဒီလိုရာသီလာတဲ့အချိန်မှာ လိင်ဆက်ဆံရင် ကိုယ်ဝန်ရနိုင်ခြေက အခြားရက်တွေထက် နည်းတယ်ဆိုပေမဲ့ လုံးဝ ကိုယ်ဝန်မရနိုင်တာမျိုး မဟုတ်လို့ပါ။
Related Article >>> ရာသီ ဘာကြောင့် နည်းရတယ်!!
အားလုံးကြားဖူးကြတဲ့အတိုင်းပါပဲ… ကိုယ်ဝန်ရဖို့ဆိုတာ အမျိုးသားသုတ်ပိုးနဲ့ အမျိုးသမီး မမျိုးဥ တို့ပေါင်းစည်းပြီး သန္ဓေသား ဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်က သူ့ရဲ့ရာသီစက်ဝန်းအလယ်လောက်မှာ မမျိုးဥကြွေတတ်တယ်ဆိုပေမဲ့ တချို့ရာသီ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု အရမ်းနီးပြီး ( ရာသီလာပြီး ၃ပတ်အကြာမှာ နောက်ရာသီလာတာမျိုး) ဆိုရင် ရာသီလာပြီး တစ်ပတ်ဆိုတာနဲ့ မမျိုးဥကြွေတတ်ပါတယ်။
အမျိုးသားသုတ်ပိုးက ခန္ဓာကိုယ်ထဲ ဝင်ပြီး ၃ရက်ကြာတဲ့အထိ အသက်ရှင်နိုင်တာမို့ ဒီမမျိုးဥကြွေတဲ့အချိန်မှာ အမျိုးသားသုတ်ပိုးနဲ့ တွေ့သွားနိုင်တာမို့ ရာသီလာချိန် လိင်ဆက်ဆံရင် ကလေးရနိုင်ခြေ ရာခိုင်နှုန်းတစ်ခုရှိတယ်လို့ ဆိုချင်တာပါ။
Related Article >>> နေရာလွဲကိုယ်ဝန်နဲ့ ပတ်သက်လို့သိသင့်သမျှ
နောက်တစ်ခုက အမျိုးသမီးတချို့က မမျိုးဥကြွေတဲ့အချိန်မှာလည်း သွေးနည်းနည်းဆင်းတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုသွေးဆင်းတဲ့အချိန်မှာ လိင်ဆက်ဆံမိမယ်ဆိုရင် ကလေးရနိုင်ခြေ အရမ်းများသွားပြန်ရော။
အားလုံးခြုံကြည့်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင် အခြား ဘာကိုယ်ဝန်တားတဲ့နည်းလမ်း( ဥပမာ… သောက်ဆေး၊ ထိုးဆေး) မသုံးဘဲနဲ့ ရာသီလာချိန် လိင်ဆက်ဆံပြီး ကိုယ်ဝန်မရအောင်နေမယ်ဆိုရင် ဒီနည်းလမ်းကို စွန့်လွှတ်လိုက်ပါ။ ကိုယ်ဝန်ကို စိတ်ချလက်ချ တားနိုင်တဲ့ တားဆေး သို့ ထိုးဆေးကိုသာ အညွှန်းအတိုင်း သေချာသောက်သုံးဖို့ အကြံပေးပါရစေ။
ဒီခေါငျးစဉျကို ဖတျပွီး မီးပှိုငျ့မီးနီကို သှားမမွငျမိပါနဲ့နျော။ မီးနီပွတယျဆိုတာ မိနျးကလေးတှေ ရာသီလာတဲ့အခြိနျကို ပွောခငျြတာပါ။ ဟုတျကဲ့ …. ဒီလို ရာသီလာနတေဲ့အခြိနျ အတူနမေိ၊ လိငျဆကျဆံမိရငျ ကိုယျဝနျမရနိုငျဘူးလို့ ထငျနခေဲ့ရငျ…..
ဒီအထငျဟာ မှားပါတယျလို့ပွောခငျြပါတယျ။ “မလိုခငျြတဲ့အခြိနျမှာ ကိုယျဝနျမရဖို့ ” ကံစမျးတဲ့ နညျးလမျးတှကေို မသုံးသငျ့ပါဘူး။ ဘာလို့ ဒီလိုပွောလဲဆိုတော့ ဒီလိုရာသီလာတဲ့အခြိနျမှာ လိငျဆကျဆံရငျ ကိုယျဝနျရနိုငျခွကေ အခွားရကျတှထေကျ နညျးတယျဆိုပမေဲ့ လုံးဝ ကိုယျဝနျမရနိုငျတာမြိုး မဟုတျလို့ပါ။
Related Article >>> ရာသီ ဘာကွောငျ့ နညျးရတယျ!!
အားလုံးကွားဖူးကွတဲ့အတိုငျးပါပဲ… ကိုယျဝနျရဖို့ဆိုတာ အမြိုးသားသုတျပိုးနဲ့ အမြိုးသမီး မမြိုးဥ တို့ပေါငျးစညျးပွီး သန်ဓသေား ဖွဈပျေါလာတာပါ။ အမြိုးသမီးတဈယောကျက သူ့ရဲ့ရာသီစကျဝနျးအလယျလောကျမှာ မမြိုးဥကွှတေတျတယျဆိုပမေဲ့ တခြို့ရာသီ တဈခုနဲ့တဈခု အရမျးနီးပွီး ( ရာသီလာပွီး ၃ပတျအကွာမှာ နောကျရာသီလာတာမြိုး) ဆိုရငျ ရာသီလာပွီး တဈပတျဆိုတာနဲ့ မမြိုးဥကွှတေတျပါတယျ။
အမြိုးသားသုတျပိုးက ခန်ဓာကိုယျထဲ ဝငျပွီး ၃ရကျကွာတဲ့အထိ အသကျရှငျနိုငျတာမို့ ဒီမမြိုးဥကွှတေဲ့အခြိနျမှာ အမြိုးသားသုတျပိုးနဲ့ တှသှေ့ားနိုငျတာမို့ ရာသီလာခြိနျ လိငျဆကျဆံရငျ ကလေးရနိုငျခွေ ရာခိုငျနှုနျးတဈခုရှိတယျလို့ ဆိုခငျြတာပါ။
Related Article >>> နရောလှဲကိုယျဝနျနဲ့ ပတျသကျလို့သိသငျ့သမြှ
နောကျတဈခုက အမြိုးသမီးတခြို့က မမြိုးဥကွှတေဲ့အခြိနျမှာလညျး သှေးနညျးနညျးဆငျးတတျပါတယျ။ ဒီလိုသှေးဆငျးတဲ့အခြိနျမှာ လိငျဆကျဆံမိမယျဆိုရငျ ကလေးရနိုငျခွေ အရမျးမြားသှားပွနျရော။
အားလုံးခွုံကွညျ့ပွီးပွောရမယျဆိုရငျ အခွား ဘာကိုယျဝနျတားတဲ့နညျးလမျး( ဥပမာ… သောကျဆေး၊ ထိုးဆေး) မသုံးဘဲနဲ့ ရာသီလာခြိနျ လိငျဆကျဆံပွီး ကိုယျဝနျမရအောငျနမေယျဆိုရငျ ဒီနညျးလမျးကို စှနျ့လှတျလိုကျပါ။ ကိုယျဝနျကို စိတျခလြကျခြ တားနိုငျတဲ့ တားဆေး သို့ ထိုးဆေးကိုသာ အညှနျးအတိုငျး သခြောသောကျသုံးဖို့ အကွံပေးပါရစေ။
Tags: Health, Intercourse, Knowledge, Menstruation, Pregnant, Sex
မယ်တင် (ဆေး-၁) November 20, 2018